Tababar Ku Saabsan Nidaamka Hogaamineed Ee Adeegyada caafimaadka. - Cakaara News
Tababar Ku Saabsan Nidaamka Hogaamineed Ee Adeegyada caafimaadka.
Jijiga (CN),jimce, 12ka February, 2016 Waxaa ka furmay huteelka xamda ee magaalada jigjiga tababar ku saabsan nidaamka hogaaminta caafimaadka iyo maamulka suuban. Tababarkaasi oo uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI ayaa waxaa loo qabtay hogaaminta dhexe ee caafimaadka oo ay ka mid yihiin gadhwadeenada geedi socodyada iyo xidhiidhiyayaasha xafiiska caafimaadka DDSI, maareeyayaasha cusbitaalada DDSI xidhiidhiyayaasha caafimaadka gobolada DDSI, iyo xubno ka socday xafiisyada ay xafiiskan caafimaadka bahwadaagta yihiin sida xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta HIV Adiska iyo wakaalada dawooyinka iyo dabagalka caafimaadka.
waxayna tababarkan ujeedadiisu ahayd sidii ay hogaaminta caafimaadku fahan buuxa uga qaadan lahaayeen nidaamka hogaamineed ee adeeg bixinta caafimaadka, hanaanka kobcinta awooda fulineed ee hogaaminta caafimaadka iyo waliba nidaamka maamulka suuban .
Waxaana furitaankii tababarkaasi ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid Maxamed oo ka warbixiyay ahmiyada uu tababarkani u leeyahay hirgalinta adeegyada caafimaadka iyo ka midho dhalinta qorshyaasha caafimaadka wuxuuna kula dar daarmay hogaamintan in mudada uu socto tababarkani ay fahan buuxa ka qaataan.
Tababarkan oo socondoona mudo 4 maalmood ah ayaa waxa la filayaa in ay ka soo baxaan qorshayaal lagu xawaare galinayo bixinta adeegyada caafimaadka oo tayaysan.